We Love Dhalinta Somaliland, 4411111, Burao (2020)
Home > Somalia > Burao > We Love Dhalinta Somaliland
We Love Dhalinta Somaliland
Khayr wada, Bur `ó
Bageka dhalinyara somaliland Noosoo dir sawiradaada xusitaanka ubaahan si aan kuugu xusno bageka We Love dhalin yarada somaliland Wiilal iyo gabdhaba ���
Asc walaalahay inta jecel ganacsiga iyo horumarka waxaan idiin haynaa fursad qaali ah
Waxaad xidhiidh ganacsi ku yeelanaysaaa 166 wadan oo shirkadu ka shaqayso ✔
Waxaad yeelan doontaa team kula shaqeeya aduunka dhan 👃
Teamka aad samaysay awgii bil kasta waxaad heli doontaa lacag commission ah ooAad kaaga farxin doontqℹ
Soomaali badan oo aan ku jiro ayaa maalin walba dhaqaalo badan ka samaynaya Adiga ma wax kuu diidi kara ayaa jira? Waa Maya
1) Waa in aad leedahay goaan noloshaada ah in aad badasho iyo hami dheer
2) 18 sano waa in aad ka wayntahay
3) waa in aad haysato kharashkii aad ku hawl gali lahayd waxaana ugu yar ee ganacsigani aad ku bilaabi kartaa 65$ iyo waxii ka badan taas oo ah lacag aad U yar oo aad Hal maalin kaga dhex samayn karto
#Diwaangalintu waa bilaash =0$
Hadaad diyaar tahay oo kali ah fadlan whatsappkani igala soo xidhiidh insha Allah hada si aan kuu caawiyo
Cadayn hadaad u baahato fiiri Sawirka hoose lacagta ku qoran iyo taarikhda iyo walaasheen Aisha juma oo ku nool Dubai horumarka ay ka gaadhay shirkadani
Kafeya For Ever living products
[02/14/17] Plz Hungurigaaga
Waxa aan maqli jiray marka Uu Dajaal Yimaado Maka agteeda ayey Wixii Munaafaq ah oo dhan Dabada isaga Saaraysaa #Makki
Markaa wixii Faqash ka hadhka ahaa oodhan ayey Jamhuuriyadii barakaysnayd Dibada idaga saartay
Allahu Akbar 💪💪👌👌 Somaliland ❤❤
Proud To be Xalaal Somalilander 👌👌❤❤
[09/05/16] Cabdi Maxamed waa 24 jir xoog la tiicaya. Wuxu dhashay maalintii Somaliya kala yaacday, ee Somaliland dib loo yagleelay. Wuxu ku dhashay Hargeysa, wuxuuna kasoo jeedaa reer danyar ah, laakiin mar xoolo lahaan jiray. Markuu dhashay wakhtigaa ka hiiliyey oo qax iyo silic ayuu la kowsaday. Aabihii Maxamed Yuusuf oo ahaa gacansade, dagaalada sokeeye ka hor, hada markuu Cabdi dhashay waa faro madhanyahay. Laba dukaan oo uu lahaa waxa galay oo boobay day-day ka socday reerka ay reerkiisa is hayeen.
Gaadhi xamuula oo Itoobiya usii socda ayuu Cabdi oo 2 jir ah iyo laba hablood oo ka yar yar iyo islaantiisii iyo laba shandadood ku tuurtay. Wuxu niyada isugu sii dhisay in hanti mar uun la heli doono, haddase uu la baxsado yacyacoodkan arradan.
Waxay sii habeen dhaxaan ba waxay ku shubmeen tuulo kililka shanaad ah oo islaantiisa reerkoodu degenaayeen. Waa ninkii Maxamed Yuusuf ee hada ka hor markuu tuuladan imanayo loo sii diyaar garoobi jiray qaabilaadiisa. Waa ninkii gaadhiga raashinka ah iska soo horeysiin jiray inta aannu reerka xididka ah u iman. Maanta waa caydh. Waa qaxoonti, waanu qaawanyahay. Qalbiga wuu ka ilmeenayaa, oo wuxu hoos ka leeyahay, ''ceebeey gacalkii caydh ma ula imi.'' Waase nin adayg qalbi fiican oo sifiican u yaqaan is rog roga waayaha.
Waa nin hore xoolihiisa loo dhadhamiyee, xididkisii kama habran xoog iyo xoolo waxay hayeen. Waxa loo yagleelay aqal soomaali, xayn yarna waala siiyey oo uu reerka darayada kaga dhabo. Maxamed Yuusuf iyo wadaadiisii Xaliimo Macalin Cabdilaahi waxay balan ku galeen in aanay is dhiibin oo nolosha iska dhiciyaan. Waxay ku balameen in aanay halkan isku ilaawin, oo maalinta u horeysa ee ay raadiyaha ka maqlaan in Hargeysa la galay oo xabadii istaagtay ay gaadhiga u horeeya alaabta ku gurtaan.
1998 kii, markay 4 ssano kasoo wareegtay maalintii ay Hargeysa kasoo qaxeen, ayay dib usoo raaceen gaadhi kale oo dhiga dheere ah. Walow ay weli caydh yihiin, markan waxay sitaan afar shandadood. Mid waxa ka buuxa hargo ay ugu tala galeen in ay Hargeysa ku dhex iibiyaan, waaba haddii la iibsanayo e. Midna waxa ugu jirta bac dhowr kiilo oo muqumad ah loogu soo riday, si ay ugu sii jid maraan.
Hargeysa oo ka duwan tii ay ka qaxeen oo markan saxansaxo nabadi kasoo carfayso ayay yimaadeen. Gurigoodii hoobiye ayaa la tagay. Alaabtii ay kaga tegeena wax la bililiqaysto iyo wax daadku qaato ayay noqdeen. Kama uusan xumaan Maxamed Yusuf muuqaalka uu ugu yimi gurigiisa, waayo wax walba waxa kala macaanaa nabada.
Reerkii wuxu markiiba u waabay aqal soomaaligii ay kililka shanaad ku lahaayeen oo kale. Maaha wax ku cusub, waase wax ay ku qanacsanyihiin. Reerkii markuu dejiyey wuxu go'aansaday in uu askari is qoro. Waa habka keliya ee uu shaxaad maalinle ah kusoo heli karo si uu Cabdi iyo labada hablood ee ka yaryar bariiskooda usoo helo. Illaahay waa u sakhiray oo askaribaa la qoray. Waxase loo sheegay in mushaharkisa aan la balan qaadi karin balse marba wixii lasoo helo wax laga siin doono. Waa rajo. Maaha hubaal. Wuuse ku qancay.
Waa 2004 tii. Maxamed Yusuf reerkiisii hada waa dhaamaan sidii hore. Aqal soomaaligii waxa lagu bedelay aqal jiingad ka samsan. Mushaharkii riyada ahaana, wuxu u noqday wax dhab noqda, haba iska soo raagee. Cabdi maxamed oo imika da'diisu tahay 10 wuxu ku jiraa dugsiga hoose ee dawlada. Marka laga yimaado labada hablood ee ka yaryar isaga, aabe Maxamed Yusuf iyo hooyo Xaliimo Macalin waxay niyada ku dhistaan in beri Cabdi nasin doono, oo ugu yaraan aqalkan jingada ah mid daara ugu bedeli doono. Waa waxa ugu yar ee ay ka filayaan.
Subax kasta waa kalahaad. Maxamed Yusuf wuxu iska xaadiriyaa saldhiga booliska. Cabdi yare wuxu iska xaadiriyaa iskuulka ardayda reeraha danyarta ahi u badanyihiin ee dawlada. Hooyo Xaliimana waxay iska xaadirisaa suuqa wadhatada oo ay dhowaan ka bilowday in ay kaariyoonle ku iibiso khudaar, si ay qayb uga qaadato dakhliga reerka ee ku kooban mushaharka askariga ay u dhaxday. Isu geyn waxa reerka soo galaa kama badna $100. Waase reer iimaan qaba oo ku qanacsan.
Waa 2010 kii. Maanta Cabdi yare waa 16 jir. Wuxu ku jiraa fasalka 7aad ee isla iskuulkii uu ka bilaabay waxbarashada. Gelinka dambe wuxu ka shaqeeyaa bakhaar u dhow meesha ay hooyadii kaariyoonlaha subixii la fadhiisato. Hooyadii ayaa ninka bakhaarka uga soo heshay shaqada. Waa fariid dantii yaqaana oo wuxu guntiga dhiisha iskaga dhigay in uu ka qayb qaato dakhliga aan weli $150 dhaafin ee reerkooda bishii soo gala.
Wuxu dhowr jeer ku hamiyey in uu cagta furo oo qayrkii halkay mareen, nolol iyo geeri, mid uun ku nasiibsado. Waxase arintaa mar walba ka hor istaaga aabihii Maxamed iyo hooyadii Xaliimo. Waalidkii waxay ku wargeliyeen in haddii uu tahriibo oo uu dhinto uu gabal baas u dumayo oo noloshooda inta ka dhiman ay oohin ku dhamaysan doonaan. Waxay kor iyo hoos ba ugu sheegeen in ay xaaladaas hada ay ku jiraan ay kaga qanacsanyihin lacag kasta oo wiilkoodu debeda uga soo diro, waaba haddii uu badbaadee. Waxayna mar walba niyada ugu dhisaan Cabdi yare in xaalada dalku is bedeli doonto oo maalin uun sidan laga bixi doono. Waa hadal ilaa maalintuu garaadsady niyada loogu soo dhisayay. Wuxu go'aansaday in ducadu ka weyntahay wax walba oo uu aabihii iyo hooyadii iyo labadooda hablood ee yar yar dhib iyo dheef la qaybsado, oo aannu dhana uga hayaamin.
Maanta waa 4/9/2016 kii. 14 sano oo uu buug iyo qalin sitay wuxu maanta Cabdi Maxamed ka qalin jabiyey jaamacada Hargeysa. Waxa hareero taagan aabihiii Maxamed Yuusuf oo suudh qurux badan iyo ookiyaale madaw gashan iyo hooyadii Xaliimo macalin Cabdilaahi oo cabaayad dheer iyo shalmad guduudan ku xaragooneysa. Labaduba waxay gashanyihiin muraayado mad madaw. Dadku waxay moodayaan in ay cadceeeda iyo siigada ay kasoo xidheen. Iyaguse waxay u soo gashadeen in ay ilmada ka da'aysa indhahooda ku qariyaan. Waxa iyaguna hareeraha sii taagan labadii hablood ee ka yaryaraa oo iyagu sanadkan bilaabay jaamacada. Mid waliba xabad mobile ah ayay marba dhan kaga sawiraysaa walaalkeed. Isla markiibana waxay kusoo tuurayaan facebook-ga iyaga oo dusha kaga qoraya, ''walaalkayo oo maanta qalin jebiyey, Illahaw noo daa.''
Reero lacagleh oo ubadkoodii qalin jebiyey ayaa iyaguna goobta dhooban. Maanta se lama kala garan karo ka lacagta leh iyo ka aan haysan. Mid walba inankiisii wuxu ku lebisanyahay direyska astaanta u ah qalinjebinta. Waalid lacag leh oo waalid fiiqiira u faani karaa ma jiro.
Hada waa saq dhexe. Damaashaadkii iyo farxadii qalin jabinta Cabd Maxamed way soo geba gabowday. Berendaha aqalka yar ee nus baloodhka ah ee ay degenyihiin ayay caw ku wada fadhiyaan isaga iyo aabihii. Hooyo xaliimo iyo labadii hablood qol ayay ku cawaynayaan oo qolona Facebook-ga kala fadhaysaa, hooyo Xalimo Macalin cabdilaahina Somaliland tv daawanaysaa iyo mudaharaadyo ka dhacay Laascaanood. Marba hoosta waxay ka leedhaay, ''Ilaahaw kala qabooji''.
Cabdi iyo aabihii waa is xaal wareysteen. ''Aabbo maanta waan qalin jebiyey, weliba xaaji Cabdi Waraabe ayaan isku maalin qalin jebinay. Waan faraxsanahay aabbo, laakiin sida aan shaqo ku helaa way yar adkaan doontaa aabbo ee iisoo ducee.'' Ayuu Cabdi ku yidhi aabihii isaga oo itaalkiisa isleh sii afeefo, waaba intaasoo aad shaqo weydaaye. Aabbe Maxamed Yusuf waa nin waayo araga oo wax badan dunida kasoo arkay. isaga oo inankiisa u caqli celinaayana wuxu siiyey jawaabtan: ''Aabbo intaas aan kusoo leekaysiiyey maalina gaajo kumaad seexan. Illaahay ayaa ina arsaaqayay. Shaqadu muhiimadeena koowaad marnaba may ahayn. Waxa aan weligay ku fekeri jiray sidii aan kaaga saari lahaa jaahilnimada oo aqoon kuu bari lahaa, si aad beri noloshaada dambe isu anfacdo. Wax kuuma barin in aad aniga ii shaqayso, ee waxan kuu baray in aad mustaqbal adigu yeelatid. Shaqo waala helaa waana la waayaa aabbo. Hanti waynu lahaan jirnay, sidaan hore kuugu sheegay, haddana way inaga baxday. Berina way ina so geli karaysaa. Imika waxan ahay sarkaal. Mushaharkaygu wuu ku filanyahay bariiskeena. Hadaad shaqo heshana wanaag, haddii kalena dee Master ba ku dar aabo. Weligaa waxa kual jiraysa ducadayda. Ha u biqin aabbo.''
Waa la is macasalaameeyey. Qof wal oo ka mida reer Maxamed Yuuusuf caawa waxay seexanayaan hurdo aanay weligood hore u seexan. Waanay ku rajo weyn yihiin in berri waaga u beryi doonaa ka duwanaan doono kii 22 sano ka hor Hargeysa ugu beryay.
Sheekadan waxa aan ka sameeyey dareenkii maanta ardaydii ka qalin jebisay jaamacada Hargeysa iyo kii waalidiintoodii garab taagnaa. Mahadsanid.
War Degdeg Ah:Garoowe Oo Laga Qaxaayo Caawa Iyo Somaliland Oo Go’aan Ku Gaadhay Inay Qabsato +...
Garoowe oo laga qaxaayo Hala yaaco 😉😂😃😂😂😂😂
www.somalilandone.com War Degdeg Ah:Garoowe Oo Laga Qaxaayo Caawa Iyo Somaliland Oo Go’aan Ku Gaadhay Inay Qabsato + Ciidamada Qaranka Oo Samirkii Ka Dhamaaday Cagta Marinaaya Maleeshiyo Beeleedka Majeerteeniya. L…
[10/08/15] Saadaasha maanta waa xagiina qofka ku gulaysta saadaasha
Si weyn ayan uxusi doonaa
#Daad_Madheed Vs #Xaysimo
Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Burao?